- mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ်: မြောက်အာဖရိကခရီးစဉ်စုဆောင်း
စက်တင်ဘာလ 20 - အောက်တိုဘာလ 4, 2019
အဆိုပါကွန်ပျူတာပညာရှင်များစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှမာစတာရဲ့အစီအစဉ် 2700 ကတည်းက 85 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 1996 + ဘွဲ့ရနှင့်အတူ, United States မှာအများဆုံး, ထူးခြားတဲ့လူကြိုက်များ, တတ်နိုင်နှင့်အောင်မြင်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် 800 လက်ရှိကျောင်းသားများကိုထက်ပို။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးဘွဲ့ရအဆင့်၏အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များပေါင်းစပ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ paid Intern များကိုအတူ။
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့် applications များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာတုံ့ပြန်ငါတို့သည်မြောက်အာဖရိကမှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခံယူ, Greg Guthrie, Ph.D ဘွဲ့ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာဌာနမှူး, နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာ၏ကျောင်း, ဒင်းဂုဏ်ထူးဆောင် Elaine Guthrie ခရီးသွားပါလိမ့်မည် ကိုင်ရိုမြို့, ကျူးနစ်, Casablanca နှင့် အယ်လ်ဂျီယား မှ အောက်တိုဘာလ 20,4မှစက်တင်ဘာလ 2019 တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အလားအလာကျောင်းသားများနှင့်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
ဘွဲ့နှင့်အတူကွန်ပျူတာသိပ္ပံကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့ရသည့် Guthrie ရဲ့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစီစဉ်ထားပို့ချချက်များနှင့်အစည်းအဝေးများမှာဖြည့်ဆည်းရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်သြဂုတ်လ 2019 entry ကိုအီဂျစ်ကျောင်းသားအချို့နှင့်အတူ MSCS Co-ညွှန်ကြားရေးမှူး Elaine Guthrie ။
အီဂျစ်, တူနီးရှား, မော်ရိုကိုနဲ့အယ်လ်ဂျီးရီးယားအတွက်အစည်းအဝေးများ (အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခံရဖို့)
ကိုင်ရို, အီဂျစ်: သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 20th, (TIME: 3: 00 - 5: 00 pm တွင်): တည်နေရာ: Intercontinental ကိုင်ရို Citystars (إنتركونتيننتالسيتيستارزالقاهرة), အိုမာအိဗ်အယ်လ် Khattab, Heliopolis, Nasr စီးတီး, ကိုင်ရို, 11757, အီဂျစ် - شارععمربنالخطاب, هليوبوليس, مدينةنصر, (القاهرة, 11757) ။ ဖုန်းနံပါတ်: + 20224800100 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ. ***ရောင်းကုန်ပြီ***
ကိုင်ရို, အီဂျစ်: စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 21st, (TIME: 2: 00 - 4: 00 pm တွင်): တည်နေရာ: ဂရိကျောင်းပရဝုဏ်ပင်မဂိတ်, အယ်လ် Tahrir, ကြော်ငြာ Dawawin, Abdeen, အီဂျစ်။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
ကျူးနစ်, တူနီးရှား: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 25th, (အချိန်: 6: 00 - 8: 00 pm တွင်): တည်နေရာ: အဆိုပါ Residence ကျူးနစ်, ကို BP 697, La Marsa, Gammarth, 2070, တူနီးရှား။ ဖုန်းနံပါတ်: + 21671910101 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
Casablanca, မော်ရိုကို: တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 29th, (အချိန်: 2: 00 - 4: 00 pm တွင်): တည်နေရာ: Sofitel Casablanca ခရီးစဉ် Blanche, ဖက်ရှင် Lounge, Rue Sidi Belyout, Casablanca, 20000, မော်ရိုကို။ ဖုန်းနံပါတ်: + 2125224-56200 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
အယ်လ်ဂျီယား, အယ်လ်ဂျီးရီးယား: သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 4th, (TIME: 3: 00 - 5: 00 pm တွင်): တည်နေရာ: ဟိုတယ်မာကျူရီ Alger Aéroport, BP 125Juillet Bab Ezzouar, Dar el Beïda, 16311, အယ်လ်ဂျီးရီးယားuniversitéလမ်းကြောင်း de l'။ ဖုန်းနံပါတ်: + 21321245970 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
Eventbrite အားဖြင့် Powered